Antso mivantana filoha Ravalomanana : faly ny tantsaha naheno ny feony androany. – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tetsy amin’ny kaomina Miandrandra, distrika Arivonimamo ny filoha Ravalomanana io tolakandro io.Faly ny tantsaha marobe tonga nihaino azy ary nilaza ny filoha fa tsy maintsy miverina an-tanindrazana manohy ny fampandrosoana an’i Madagasikara, indrindra ny tontolo ambanivohitra.
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 juillet 2011 Catégories Politique
2 pensées sur “Antso mivantana filoha Ravalomanana : faly ny tantsaha naheno ny feony androany.”
16 juillet 2011 à 3 h 46 min
Misaotra anao Atoa Filoha tsy nanadino an’ireo tantsaha!
Aza manahy ianareo tantsaha fa tsy maintsy tonga ny filohantsika RAVALOMANANA!
Izaho koa dia mba miangavy ny tompon’andraikitry ny serasera ao @ Mouvance RAVALOMANANA mba hifampidinika amin’ny mpitarika mba hanao toy izao any amin’ny faritra hafa, indrindra amin’ireny toerana hianjadian’ny « pression » avy amin’ny FATn’ailka ireny (oh.: Amoron’i Mania, Vatovay Fitovinany, Sofia,…..). tena ilaina mihitsy ny toy izao mba ahafantaran’ny rehetra fa mbola vonona hitondra ny Fanjakana i Dada!
Dia samy miomana daholo isika amin’ny fanomanana ny fodian’i Dada e!
16 juillet 2011 à 4 h 16 min
Misaotra indrindra manantona ireo tantsaha: misimisia tokoa ny toh’izao, fa ireo no azo lazaina fa very fanahy mbola velona
Nijanona tampoka ireo tetik’asa marobe ho an’ny tantsaha valopolo isan-jaton’ny mponina malagasy notontosain’ny filoha Ravalomanana.
Tandremo ny mangilatsofina @ DJ sy ny tariny, fa olon’ny maizina ireo – boîte de nuit no tetik’asa mahavanana azy,
olona mpangalatra sy tia rendrarendra ary mataho-tana-hiepaka iray trano ny HAT
Précédent Article précédent : Miandrandra ny filoha Ravalomanana ny tantsaha.
Suivant Article suivant : Tim Ambohimangakely : vonona amin’ny fitsenana an’i Dada !